Turmeric scrub နနွင်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပျက်စီးသွားတဲ့ အသားအရည် ကို ပြန်ပြီးထိန်းသိမ်းရုံတင်မကပဲ ချက်ချင်းပြန်ပြုပြင်ပေးတဲ့ skin care တမျိုးဖြစ်ပါတယ်။: Buy Online at Best Prices in Myanmar | Shop.com.mm
Turmeric scrub နနွင်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပျက်စီးသွားတဲ့ အသားအရည် ကို ပြန်ပြီးထိန်းသိမ်းရုံတင်မကပဲ ချက်ချင်းပြန်ပြုပြင်ပေးတဲ့ skin care တမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
Brand: The Mix By Su
More Bath & Body from The Mix By Su
Enjoy free delivery if your order value is Ks 20,000
The Mix eShop
Product details of Turmeric scrub နနွင်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပျက်စီးသွားတဲ့ အသားအရည် ကို ပြန်ပြီးထိန်းသိမ်းရုံတင်မကပဲ ချက်ချင်းပြန်ပြုပြင်ပေးတဲ့ skin care တမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
နေရောင်ခြည် ကြောင့်ဖြစ်ဖြစ် ၊ အမာရွတ်တွေရှိနေလို့ဖြစ်ဖြစ် ၊ အမည်းစက်တွေကြောင့်ဖြစ်ဖြစ် ၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပျက်စီးသွားတဲ့ အသားအရည် ကို ပြန်ပြီးထိန်းသိမ်းရုံတင်မကပဲ ချက်ချင်းပြန်ပြုပြင်ပေးတဲ့ skin care တမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နနွင်း ရဲ့အကျိုးအာနိသင်တွေကတော့….-glowing ဖြစ်စေတယ်။
-Dead cells တွေဖယ်ရှားပေးပါတယ်။
-အညိုအမဲ တွေ အသားမညီတာတွေ ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။
-မြန်မာရှေးရိုးစဉ်ဆက်ထဲက မီးနေသည်တွေ နနွင်းလိမ်းသင့်ပါတယ်။ ခြေလက်ကိုက်ခဲတာမျိုးဆိုလည်း နနွင်းလိမ်းရင်ဆေးဖက်ဝင်ပါတယ်။
Scrub ဆိုတာဘာလဲ? နေရောင်ခြည် ကြောင့်ဖြစ်ဖြစ် ၊ အမာရွတ်တွေရှိနေလို့ဖြစ်ဖြစ် ၊ အမည်းစက်တွေကြောင့်ဖြစ်ဖြစ် ၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပျက်စီးသွားတဲ့ အသားအရည် ကို ပြန်ပြီးထိန်းသိမ်းရုံတင်မကပဲ ချက်ချင်းပြန်ပြုပြင်ပေးတဲ့ skin care တမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ Turmeric scrub က ဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေရလဲ? Glowing ဖြစ်စေတယ်။ အသားချောမွေ့စေပါတယ်။ Dead cells တွေဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ အညိုအမဲ တွေ အသားမညီတာတွေ ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ မြန်မာရှေးရိုးစဉ်ဆက်ထဲက မီးနေသည်တွေ နနွင်းလိမ်းသင့်ပါတယ်။ ခြေလက်ကိုက်ခဲတာမျိုးဆိုလည်း နနွင်းလိမ်းရင်ဆေးဖက်ဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နနွင်းဆေးစွန်းတော့ အိပ်ရာတွေအဝတ်တွေ အမြဲပေတတ်တော့ ရေချိုးတုန်း scrub လေးတိုက်ရင် ပိုအဆင်ပြေပါတယ်နော်။ ဘယ်လိုသုံးရမလဲ??? ရေမချိုးခင် အသားမှာ လိမ်းလိုက် သို့မဟုတ် ရေတခွက်ချိုးပြီးအသားမှာလိမ်းလိုက်ပါ။ ၅မိနစ်လောက်ထားပါ။ ပြီးရင် ရေဆေးချပြီး ဆပ်ပြာစင်စင်တိုက်ပါနော်။ နနွင်း က ဆပ်ပြာ ပြောင်အောင်တိုက်မှ အဝါပျောက်မှာမလို့ပါ။ တပတ်ကို ၂ခါကနေ ၃ခါထိအသုံးပြုလို့ရပါတယ်နော်။ မျက်နှာပါလုပ်လို့ရပါတယ်ရှင့်။ သကြားကို အနုဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားလို့်ပါ။
Specifications of Turmeric scrub နနွင်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပျက်စီးသွားတဲ့ အသားအရည် ကို ပြန်ပြီးထိန်းသိမ်းရုံတင်မကပဲ ချက်ချင်းပြန်ပြုပြင်ပေးတဲ့ skin care တမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
Ratings & Reviews of Turmeric scrub နနွင်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပျက်စီးသွားတဲ့ အသားအရည် ကို ပြန်ပြီးထိန်းသိမ်းရုံတင်မကပဲ ချက်ချင်းပြန်ပြုပြင်ပေးတဲ့ skin care တမျိုးဖြစ်ပါတယ်။